★မြန်မာ့အလင်း★: အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တဦး၏အိမ်ကို ဗလီအဖြစ် မြို့တော်ဝန်သတ်မှတ်
အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တဦး၏အိမ်ကို ဗလီအဖြစ် မြို့တော်ဝန်သတ်မှတ်
ဒီသတင်းမှာ ကျွန်ကုလားတွေ ကောက်ကျစ်တာကို အကောင်းမြင်အောင် လှည့်ပတ် ရေးထားတာကို သတိထားကြပါ။ ပလီနဲ့အတူ ဆွမ်းလောင်း ဓမ္မာရုံသစ်များကို တည်ဆောက်ပေးတယ်ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ဓမ္မာရုံဆောက်ပေးလို့ ဘယ်လူကြီးကမှ ကြံ့ဖွတ်ကိုထောက်ခံဖို့ စည်းရုံးမပေးပါဘူး။ ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက်လို့ ကြံ့ဖွတ်ကို ထောက်ခံဖို့ ပြောတဲ့ ဘုန်းကြီးလည်း လုံးဝမရှိပါဘူး။ လမ်းဖေါက်ပေးလို့လဲ . . . ငါတို့လမ်းကို ကြံ့ဖွတ်ကဖေါက်ပေးတယ် သူ့ကိုမဲထည့်ပါလို့ စည်းရုံးမပေးကြပါဘူး။ ကုလားတွေက အဲလိုမဟုတ်ဘူးဗျ။ ပလီဆရာတွေဟာ အရမ်းကို အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကြပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်ကို ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် ခေါင်းဆောင်တွေက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကူညီနေကြတာပါ။ ကြံ့ဖွတ်အမာခံ ၂ ထောင်ကျော်လဲပေးခဲ့တယ်။ ( ရခိုင်မှာ သခင်ရခိုင်တွေက ကြံ့ဖွတ်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကုလားတွေက ကြံ့ဖွတ်ကို အားကြိုးမာန်တက် ထောက်ခံနေပါတယ်။) ဓမ္မာရုံဆောက်ပေးတာနဲ့ ပလီဆောက်ပေးတဲ့ ကိစ္စ၂ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရေးပြထားတာဟာ ဒီမိုတွေရဲ့ မရိုးသားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ကုလားတွေ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး သူတို့ မွတ်ဆလင်ဝါဒအတွက် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ပြည်ပမှာတော့ ဒီမိုတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး နအဖဖြုတ်ချရေးကို လုပ်နေကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့အချင်းချင်း မသင့်မြတ်တာကို ဒင်းတို့က အခွင့်အရေးရအောင် လုပ်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကျုပ်တို့ အိမ်မှာ ခိုကပ်နေပြီး သာရေပေါ်အိပ် သားရေနားစားနေတဲ့ ချေးစား ခွေးတွေပါပဲ။ ခက်တာက . . ခင်ဗျားတို့တွေက ကုလားကို ဒေါသပဲ ထွက်ကြတယ်။ မွတ်ဆလင်အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ ဘာမှတော့ မကူညီလိုကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့်အမျိုးသားရေးကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ ဖျောက်ပြီး ဆီပုံးနဲ့ ကော်မန့်တွေမှာ မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်ရေး ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ လက်တွေ့ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရင်တော့ ကုလားကို ဒေါသထွက်နေလဲ အပိုပဲဆိုတာ သတိထားပါ။
ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) ၏ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ၎င်းမြို့နယ်တွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ ထောက်ခံဆန္ဒမဲရရှိရေး ထပ်မံ ကြိုးစားသည့် အနေဖြင့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တဦးပိုင် နေအိမ်အဆောက်အအုံ တခုကို ၀တ်ပြုဗလီ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အင်းဝလမ်းပေါ်ရှိ ၆ ရပ်ကွက် ရယက ရုံးဘေးတွင် တည်ရှိသော အစ္စလမ်ဘာသာဝင် တဦးပိုင် နေအိမ် အဆောက်အအုံကြီးတခုကို ဗလီအဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က တရားဝင် အမိန့်စာထုတ်၍ သတ်မှတ် ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“၆ ရပ်ကွက် ရယက ရုံးရဲ့ ခြေရင်းဘက်မှာ အရင်က တရုတ်လုပ်ငန်းရှင် တဦးပိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံကြီး တခုရှိတယ်။ အဲဒါက တော်တော်လည်းကြီးတယ်။ ရဲတိုက်ကြီးလိုပဲ။ ပေ ၄၀၊ ပေ ၆၀ ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာ။ ၂ ထပ်ခွဲ ဆောက်ထားတာ။ နောက်တော့ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တယောက်က ၀ယ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကို မြို့တော်ဝန်က ဝတ်ကျောင်းဗလီလုပ် ဆိုပြီး တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးတယ်။ အခု ဆေးတွေသုတ်နေပြီ။ ဒီအပတ်ထဲမှာ ဗလီစတက်ဖို့ လုပ်နေပြီ” ဟု ၆ ရပ်ကွက်သား တဦးက ရှင်းပြသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၆ ရပ်ကွက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တချို့မှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေကြပြီး တောင်ဥက္ကလာပနေ ပြည်သူအများစု မသိကြသေးကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါသတင်း တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်အတွင်း ထပ်မံပျံ့နှံ့လာပါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များအကြား အခြေအနေများ ထပ်မံတင်းမာလာနိုင်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ဦးအောင်သိန်းလင်းက ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်များ တမင်လုပ်နေတာလား မသိဘူး။ ဒီလူ ထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်နေတယ်” ဟု တောင်ဥက္ကလာ ၁၃ ရပ်ကွက်သားတဦးက ပြောသည်။ (တကမ္ဘာလုံးမှာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကလဲ မွတ်ဆလင်နဲ့ပဲလုပ်လို့ရသလား? ဘာဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေအကြား မလုပ်ကြတာလဲ?)
မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များထံမှ မဲများရရှိစေရန် ဗလီဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း၊ လူနေ အဆောက်အအုံကို ဗလီအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များအတွက်လည်း ဆွမ်းလောင်း ဓမ္မာရုံသစ်များကို တပြိုင်နက်တည်း ဆောက်လုပ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
မြို့တော်ဝန်ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ၇ ရပ်ကွက် သီရိဇေယျာလမ်းတွင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ၏ ထောက်ခံမဲ ရရှိရေးနှင့် ပါတီဝင်အင်အား ရရှိရေးအတွက် ဆောက်လက်စ ဆိုင်းငံ့ထားသည့် တောင်ဥက္ကလာပ ဗလီကြီးကို ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးခဲ့ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်မွတ် စလင်ဘာသာဝင်များအကြား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်လုနီးနီးအထိ အခြေအနေများ တင်းမာ ခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်မည်ကို အလွန်စိုးရိမ်လျက်ရှိပြီး ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ရရှိရေးနှင့် ပါတီဝင်အင်အား ရရှိရေးအတွက် နည်းလမ်းမျိုးစုံ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံရေးသမားများကမူ ဦးအောင်သိန်းလင်းသည် ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးတွင် အသုံးချခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင် ဘဏ္ဍာများနှင့် မဲဆွယ် လမ်းခင်းခြင်း၊ ငွေချေးခြင်း အပါအ၀င် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:55 AM
ခင်ဗျားတို့က မုစလင်တွေအဲလို လုပ်တာကျတော့..ပြောတယ်နော်..
ဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မြေးဆိုလို့ သွေး ရောနေတဲ့ (ငါနိုင်းလိုက်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ပါထိမှာ စိုးလို့ကွာ..)
မင်းတို့ ဘလော့ လူမဖတ်မှာပဲစိုးရိမ်းနေတာမလား..
ဟေ့ကောင် . . . စစ်တက္ကသိုလ်က မင်းတို့ကောင်တွေကို ဘာတွေသင်ပေးလဲ? ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ဗိုလ်ချုပ်တွေ နိုင်ငံရေးလုပ်တာကို မျက်ကန်းထောက်ခံတဲ့ စစ်သား မရှိပါဘူးကွာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲ အဲလို အလုပ်မျိုးကို မြင်တွေ့နေရတယ်။ ဖာသည်မလောက်မှ သိက္ခာမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကို မျက်ကန်းထောက်ခံဖို့ စစ်သားတွေမှာ တာဝန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အခြေခံစစ်စည်းကမ်းလေးတောင် မသိဘူးမဟုတ်လား? မင်းတို့လို ဦးဏှောက်မရှိတဲ့ ကောင်တွေကို စစ်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်တာကို တကယ်အံ့သြ မဆုံးဘူး။
အခုဟာ မွတ်ဆလင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ကိစ္စကိုရေးထားတာ မဆီမဆိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စောက်တင်းလာပြောနေတယ်။ ယောကျားဖြစ်ပြီး . . . အချိန်ပြည့် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စောက်တင်းပဲပြောချင်နေတယ်။ ဟေ့ကောင်.. . မင်းတို့ရဲ့ ဖာသည်မလောက်မှ သိက္ခာမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီနေနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အဓိကစဉ်းစားပါ။ ပြီးမှ မိန်းမတစ်ယောက် စောက်တင်းပြော.. ဟုတ်ပြီလား။ မင်းလိုကောင်က တပ်မတော်အရာရှိ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူး။ မင်းကို အလေးပြုနေရတဲ့ စစ်သားလေးတွေကို တကယ်ကို သနားတယ်။
စစ်တက္ကသိုလ်ကို မြန်မာပြည်၏ဖာခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ အဆိုပြုနေတဲ့
ဒီမိုတွေကို ငတုံးပြောသော ကိုဇော်မျိုးလေး...နအဖ ဘက်က ကောင်တွေ ချီးဘရိန်း ဖြစ်နေတာလာကြည့်လှည့်ဗျာ။ ပိတောက်မြေမှာ....